ASA FITSABOANA : Ataon’ny fitondrana ankilabao ireo mpianatra ho mpitsabo | NewsMada
ASA FITSABOANA : Ataon’ny fitondrana ankilabao ireo mpianatra ho mpitsabo
Nanatanteraka fitokonana fanairana tety ireo mpianatra ho mpitsabo.
Raikitra ny fitokonana fanairana notanterahin’ireo mpianatra ho mpitsabo tetsy amin’ny tokotany malalaky ny HJRA. Noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny tambin-karama efa-bolana no anton’izao hetsika notanterahin’izy ireo omaly izao…
Tonga amin’ny tsy azo anoharana! Noho ny fanaovan’ny fitondrana bemarenina ny fangatahana ataon’ireo mpianatra ho mpitsabo. Niakatra amin’ny dingana ambonimbony kokoa izy ireo amin’ny fanairana ireo mpitondra voakasik’izany. Nanatanteraka fitokonana tetsy amin’ny tokotanin’ny HJRA ireo mpianatra ho mpitsabo, omaly. Mahatratra 800 izy ireo no indray nanapa-kevitra hampiato ny asany eny anivon’ireo hopitalim-panjakana. Araka ny fantatra, tambinkarama efa-bolana be izao no indray tsy azon’ireto mpianatra ho mpitsabo ireto ka nahatonga azy ireo hanao izao fitokonana fanairana izao.
“Ankilabao tanteraka izahay manoloana ny raharaham-panjakana misy amin’izao fotoana izao”, hoy ny solontenan’ireo mpianatra ho mpitsabo. “Karazany noveriverezina fotsiny izahay nandritra ny fihaonana isan-karazany tamin’ireo tomponandraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Nampanantenaina fa avoaka faran’izay haingana ny tambin-karamanay, kanefa mandraka ity ny androany, mbola tsy nivoka izany. Tamin’ny fifanarahanay farany teo, nampanantena izy ireo fa havoaka mialohan’ny fetin’ny Paska io tambin-karama io, saingy niala maina izahay”, hoy ny fanampim-panazavana.
Velon-taraina, araka izany, ireto mpianatra ho mpitsabo ireto. “Tsy misy mihitsy ny fitsinjovana anay mpianatra. Ny asa anefa mafy, ny asa tsy maintsy tanterahina”, hoy hatrany ny fanambaran’izy ireo. Lasa takalon’aina ireo marary vokatry ny mety ho fitokonana tontosain’izy ireto mpianatra ho mpitsabo ireto. Manampy trotraka, etsy ankilany izay, ny tsy fahampian’ny mpasa eny anivon’ireny hopitaly sy sampandraharaha samihafa eny anivon’ny toeram-pitsaboana ireny. Mitaky fitsaboana haingana noho izany ny olan’ireto mpianatra ireto satria ny fahasalamam-bahoaka mihitsy no voakitikitika amin’izao raharaha izao. Mba tsy ho pilivava fotsiny ny hoe : “Izay marary andrianina, raha tsy eo ireo mpitsabo mpikarakara”.